Indlu ebukekayo eseduze neVerdon - I-Airbnb
Indlu ebukekayo eseduze neVerdon
Norante, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Béatrice
Indlu ebukekayo engu-140m2 ezintabeni, enhliziyweni yendawo yokugcina indawo yemvelo yaseHaute-Provence. Ukuchayeka kwaseNingizimu, okutholakala endaweni efanele maqondana nezindawo eziningi ezikhanga izivakashi esifundeni: Castellane, Gorges du Verdon, Digne les Bains…
Indlu yezinhlamvu engu-140m2 entabeni yabantu abangu-6.
Itholakala eduze kweCorobin Pass emgwaqeni waseNapoleon, obheke eningizimu, emaphandleni ngokubukwa okumangalisayo kwentaba nezimangaliso zayo. Indawo enhle kakhulu yokujabulela ngokugcwele UKUTHULA OKUTHULILE nentaba futhi ngaleyo ndlela ujabulele iholidi eliphumule ngempela.
Indlu yakho yakhiwe ngokulandelayo:
Ikhishi elihlome ngokuphelele elinomshini wokuwasha izitsha, i-ceramic hob, ifriji, ifriji, ihhavini, i-microwave, umshini wekhofi we-Nespresso ... (ikhofi yakudala), iketela, i-toaster, yonke into edingekayo ekuphekeni.
Kunikezwe uketshezi lokugeza izitsha, insipho, amaphilisi okugeza izitsha.
Igumbi lokuhlala elikhulu elingu-40 m2 elinosofa wesikhumba, indawo yomlilo eshisa izinkuni, i-TV + DVD, iBlue Ray + ibhokisi le-inthanethi le-wifi lifakiwe, imidlalo yebhodi ...
Igumbi elingu-15m2 elinombhede ophindwe kabili Amashidi anikeziwe, imibhede eyenziwe lapho ufika.
Phezulu kwe-mezzanine enkulu engu-40m2 ivulekile kakhulu futhi ithokomele ngombhede omkhulu, i-TV kanye neBlue Ray indawo enkulu yokugcina igumbi elimnandi kakhulu ...
Igumbi le-20m2 elinethala lengadi kanye ne-barbecue ....
Igumbi lokugezela elikhulu, amathawula, iphepha lasendlini yangasese kanye nensipho.
4.85 · 112 okushiwo abanye
INorante iyidolobhana elikhulu elinomgwaqo walo omkhulu ophahlwe izindlu ezinezivalo eziluhlaza kanye nomthombo omncane ... IParma, indlu yokuwasha enezimbali, isonto layo lamatshe ...
I-Petanque ne-ping pong ...
Ukuhamba ngezinyawo ukusuka edolobhaneni (noma umzila oya e-Digne Barreme)
izinyathelo ezimbili .... kugeleza umfula ocwebile ... ipharadesi lokubhukuda nemidlalo yezingane ...
Hlola ezinye izinketho ezise- Norante namaphethelo